အာဂျင်တီးနား Dogo, ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျရောက်စေပါလိမ့်မယ်တဲ့မျိုးစိတ်: ဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်စောင့်ရှောက်မှု | Dogs World
Lurdes Sarmiento | | အထွေထွေခွေးများ
Dogo Argentino ဟုခေါ်သည့်သားဖောက်မျိုးစိတ်သည်တန်ဂိုနိုင်ငံဖြစ်သောအာဂျင်တီးနားမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။ သူမပြောနိုင်တာကတော့ 'Perro Pila Argentino' နမူနာနဲ့အတူ ၎င်းတို့သည်တိုင်းပြည်အတွင်းရှိလူမျိုးစုများသာဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သမိုင်းကြောင်းနှင့် ၁၉၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဒေါက်တာ Norse Martínezသည်တိရိစ္ဆာန်ဂိမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေသည့်အခါရရှိရန်အရည်အချင်းအားလုံးကိုစုဆောင်းခဲ့သည် သာလွန်သောအစွမ်းသတ္တိနှင့်အမဲလိုက်ဖောက်။ ထို့အပြင်နာမည်ကိုအစွမ်းထက်သည့်ခွေးများဟုခေါ်သောအမဲလိုက်ခွေးများကတိကျစွာဖန်တီးထားသည်။
ဒီမျိုးစိတ်ဟာကြီးမားတဲ့နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အသွင်အပြင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးများသောအားဖြင့်ကြံ့ခိုင်ခြင်းနှင့်ခိုင်မြဲသည်။ ၎င်း၏အမွေးသည်အဖြူရောင် ဖြစ်၍ ၎င်းသည်အလွန်တောက်ပစေသည်။ အလားတူပင်၎င်းသည်တိုတောင်းပြီးအနက်ရောင်အစက်အပြောက်များနှင့်အတူ သောနှာခေါင်းနှင့်နားရွက်ပေါ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
သူကအရမ်းတက်ကြွနေသည် တစ်နေ့လျှင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာလမ်းလျှောက်ခြင်းလိုအပ်သည် သူပင်ပန်းသည်အထိသူသည်နောက်တဖန်အိမ်ထဲသို့ဝင်ရန်ခက်ခဲသော်လည်း။
ရှည်လျားသောလမ်းလျှောက်မှုများမှတစ်ဆင့်လေ့ကျင့်မှုသည်ပုံမှန်ဖြစ်ရမည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အလွန်တက်ကြွသောနမူနာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုအပိုင်းကိုလျစ်လျူရှုလျှင်၊ ဒီခွေး၏မျိုးသည်၎င်း၏စွမ်းအင်ကိုချန်လှပ်ရန်နည်းလမ်းမရှိပါ သူသည် ဦး နှောက်အာရုံကြောနှင့်ပင်ရန်လိုတတ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏စိတ်ထားမဟုတ်သော်လည်းသင်၏စိတ်ဖိစီးမှုကိုသင်လွတ်မြောက်စေရမည်။
မျှမျှတတ docile စိတ်ထားရှိခြင်းအားဖြင့်, ဒါကြောင့်သင်တန်းလေ့ကျင့်ရေး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုရှုပ်ထွေးမဟုတ် သူတို့ကိုလေ့ကျင့်ရန်လွယ်ကူသည်.
အိမ်၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများသည်၎င်းတို့အားအမျိုးအစားအားလုံးနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုပြင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပြီးသည့်အတိုင်းဤခွေးမျိုးသည်လူနှင့်အခြားတိရိစ္ဆာန်များနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုသင်စဉ်းစားသင့်သည် သင်မသိသောလူများကိုသင်အနည်းငယ်သံသယဖြစ်နိုင်သည်။
အခြားခွေးများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်သူတို့နှင့်အပြုသဘောမဆက်ဆံနိုင်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ဘဲကြီးကြီးမားမားလွှမ်းမိုးနိုင်သည် ပျင်းတာကိုသူမကြိုက်ဘူး။ အလေးချိန် ၄၀ မှ ၄၅ ကီလိုဂရမ်အထိရှိပြီးအရောင်သည်အဖြူရောင်ဖြစ်ပြီးပျမ်းမျှသက်တမ်းသည် ၁၂ နှစ်အထိကြာနိုင်သည်။
သူဟာသစ္စာရှိပြီးဂရုစိုက်တတ်သူဖြစ်တယ်။ သူစိမ်းအတန်ငယ်သံသယ နှင့်ခိုင်မာတဲ့မိသားစုဆက်ဆံရေး။ ဒီချိုးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသောအခြေအနေများသည်သင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုကျိန်းသေအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။
၎င်းသည်စေ့စေ့ကြည့်ရှု။ မျက်လုံးသည်မှောင်မိုက်နေပြီးတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကွဲလွဲစွာရှိပြီးပုံသဏ္oာန်ရှိသည်။ နားကိုအစဉ်အဆက်ဖြတ်တောက်ကြသည် နိုင်ငံတော်တော်များများကဒီအလေ့အကျင့်ကိုတားမြစ်ထားပေမဲ့တြိဂံပုံသဏ္shapeာန်ကိုပေးဖို့လိုတယ်။
သင်တန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်၎င်းကိုသတိပြုသင့်သည် ဒီဟာအလွန်ပျြောရှငျခွေးဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်အိမ်သူအိမ်သားကုမ္ပဏီ၏အသေးငယ်ဆုံးကိုစောင့်ရှောက်ရန်လိုအပ်သောအရည်အသွေးတွေရှိအောင်။
၎င်း၏စိတ်ထားသည်အခြားလူမျိုးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသော်လည်း လူမှုရေးဖြစ်စဉ်ကိုမှန်ကန်စွာလျှောက်ထားခဲ့သည် သူကအခြားခွေးများနှင့်အပြန်အလှန်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ စပိန်တွင်တစ် ဦး ချင်းသင်ယူခြင်းမှအုပ်စုလိုက်နည်းစနစ်အထိလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုနည်းစနစ်များစွာရှိသည်။
သာယာသောပတ် ၀ န်းကျင်တွင်လေ့ကျင့်မှုအားအလွန်အေးသောအခြေအနေများတွင်ပြုလုပ်ရမည်။ အားလုံးအထက်ထက်၌, အိမ်မှာခိုင်မာတဲ့တန်ဖိုးများရှိရမည်.
ဒီခွေးဟာတောင်းစားတာကိုနှစ်သက်တယ်။ သူကသူ့အစောင့်တွေကိုစစ်ဆေးရတာကြိုက်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါပြောတယ် သူတို့အားလုံးအမိန့်ကိုနားလည်.
သူကအားကစားသမားကောင်းတစ်ယောက်ပါ၊ ဒါကြောင့်သူဟာလှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးမှာအဖော်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ တကယ်က၎င်း၏အလားအလာကိုပြသရှိရာလယ်ပြင်၌အများကြီးထွက်မတ်တပ်ရပ်နှင့်၎င်းသည်အမဲလိုက်ခွေးဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။
ဤနမူနာသည်အလွဲသုံးစားပြုခြင်းနှင့်အော်ဟစ်ခြင်းများကိုအလွန်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အတွက်၎င်းအား (ဤမျိုးပွားနှင့်မည်သည့်တိရိစ္ဆာန်မျိုးမဆို) ပင်၎င်းကိုကိုယ်ထိလက်ရောက်အပြစ်ပေးရန်မစဉ်းစားပါနှင့်။ သူတို့ရဲ့အပြုအမူအတွက်ဆုချခံရတာကိုသူတို့နှစ်သက်ကြတယ်ဒီအပြုအမူအတွက်အပြုသဘောအားဖြည့်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သူ့အနေဖြင့်ခွေးလေးကိုတည်ငြိမ်ပြီးပျော်ရွှင်စေခြင်းအားဖြင့်အလွန်လျှင်မြန်စွာသင်ယူရန်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်မှန်ကန်သောနည်းစနစ်များကိုတသမတ်တည်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲသုံးနိုင်သည်၊ သို့သော်ယဉ်ကျေးစွာဆက်လက်တည်ရှိနိုင်သည်။ နှုတ်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲခန္ဓာကိုယ်နည်းပညာများကိုအသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါသတ်သတ်မှတ်မှတ်အခါသမယများ၌သာခိုင်မာသောအသံကိုသင်သုံးနိုင်သည်။
ပျင်းစရာကောင်းလိုက်တာ သင်ကြားမှုသည် ၁၅ မိနစ်မှ ၂၀ မိနစ်အထိကြာသင့်သည်။
လှုပ်ရှားမှုများကိုပြောင်းလဲပါ၊ ပျော်စရာနှင့်သာမန်အလုပ်များအပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းများကိုကစားပါ။ သငျသညျပြောင်းလဲသွားလျှင်, သင်ခွေးစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူတုံ့ပြန်လိမ့်မည်ဟုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ် သူတို့ကိုပျင်းစရာအဖြစ်လျစ်လျူရှုမည့်အစားထူးခြားသော်လည်းသူသည်ထိုအတိုင်းပင်!
သင်၏လေ့ကျင့်မှုသည်ပြင်းထန်ရမည်ဟုထပ်မံသတိပေးသည်။ သငျသညျအလွန်တက်ကြွသောဖောက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးကြိုးစားသင့်ပါတယ် ထို့အပြင်အပန်းဖြေမှုနှင့်တည်ငြိမ်မှုများစွာလိုအပ်သည်။
၎င်းသည်အမဲလိုက်သောခွေးတစ်ကောင်နှင့်၎င်းသည်မိသားစုနှောင်ကြိုးကိုမည်သို့ရရှိနိုင်မည်နည်း။ အကယ်၍ သင်သည်ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုခုကိုတွေ့ရှိပါက၎င်းကိုမစဉ်းစားဘဲအကာအကွယ်ပေးလေ့ရှိသည်။ ၄ င်းတို့သည်ခွေးပေါက်စများဖြစ်သည့်အခါတွင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံမှုပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်အရွယ်ရောက်သူအဖြစ်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကပြုလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ဒီနမူနာ ၎င်းသည်အလွန်ကျန်းမာသန်စွမ်းသောခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်သူ့ကိုနေမကောင်းဖြစ်တာသိပ်မများပေမယ့်သင်အမြဲသတိထားသင့်တယ်။ ၎င်းတွင်တွေ့နိုင်သည့်အရာမှာတင်ပါးဆုံတွင်းရောဂါရှိခြင်းနှင့်အဆစ်ပြproblemsနာများဖြစ်သော်လည်း၎င်းအာဟာရအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ သူတို့သည်အဝလွန်လေ့ရှိကြောင်းသတိရပါ။
သင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်ဆရာဝန်ထံပုံမှန်သွားရန်မှာအလွန်အရေးကြီးသည်၊ အာဂျင်တီးနား Dogo မျိုးစိတ်နှင့်ပတ်သက်သောနမူနာများရှိသည် နားပင်းသောအခြေအနေများ။
သူတို့၏အရေပြားသည်အလွန်ထိခိုက်လွယ်သောကြောင့်နေနှင့်ကြာရှည်စွာထိတွေ့ခြင်းမှပြင်းထန်သောမီးလောင်ဒဏ်ရာများရရှိနိုင်သည်။ သင်၏နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေစဉ်အတွင်းလမ်းလျှောက်သောအခါလည်း ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ထားပါ၊ ထို့ကြောင့်သင်သည် tick သို့မဟုတ်အခြားကပ်ပါးကောင်များနှင့်မကူးစက်နိုင်ပါ.
သင်ကအမှိုက်ဖယ်ရှားပစ်ရန်မကြာခဏကဖြုတ်ရမည် တစ်လအကြိမ်စုံတွဲသည်လုံလောက်သောထက်ပိုလိမ့်မည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်လှပမှုရှိရန်အတွက်မျက်စိ၊ ပါးစပ်နှင့်နားများရှိတစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုသည်လိုအပ်သည်။
နောက်ထပ်အလွန်အရေးကြီးသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် သငျသညျသူ၏မျက်စိဂရုစိုက်ဖို့ရှိသည်'ရေစိုနေသောမျက်စိ' ၏ဆိုးရွားမှုကြောင့်ရောင်ရမ်းခြင်းအန္တရာယ်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်နေ့စဉ်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်။
တိုတိုပြောရရင်ဒီမျိုးဆက်ဟာလုံးဝရန်လိုမှုမရှိဘူး၊ သူတို့ဟာချစ်စရာကောင်းပြီးအရမ်းကလေးထိန်းတယ်။ ဒါကနာမည်ကြီး Dogo Argentino ပါ။ ကြံ့ခိုင်အေးဆေးတည်ငြိမ်သတ္တိ, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အဖော် သူသည်ခိုင်မာသည့်နှောင်ကြိုးကိုမွေးမြူသောကြောင့်သူသည်မိသားစုကိုကြီးစွာသောကာကွယ်ပေးသူဖြစ်ကြောင်းမမေ့မလြော့ဘဲသည်းခံလျက်ပင်ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခွေးကမ္ဘာကြီး » အထွေထွေခွေးများ » အာဂျင်တီးနား Dogo